आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फाल्गुन १ गते आईतबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुबरी १२ तारिख – फाल्गुन सङ्क्रान्ति | karnalikhabar.com
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फाल्गुन १ गते आईतबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुबरी १२ तारिख – फाल्गुन सङ्क्रान्ति – karnalikhabar.com
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फाल्गुन १ गते आईतबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुबरी १२ तारिख – फाल्गुन सङ्क्रान्ति
प्रकाशित मिति :2017-02-12 01:40:27 आज श्री साके १९३८, वि.सं. २०७३ साल फाल्गुन १ गते आईतबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ फेब्रुबरी १२ तारिख, फाल्गुन सङ्क्रान्ति, फाल्गुन कृष्ण पक्ष दृितीया तिथी, २९:१९ बजे सम्म चन्द्रमा सिंह राशिमा, सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे / लाइटनेपल डटकमबाट)
सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय र परिश्रम खर्चनु पर्ने हुन्छ । आफूभन्दा सानाको सहयोग द्वारा गरिएको कामहरु सहज हुनेछन । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउला । मनोरन्जनका साधनको खरिदको योग रहेको छ । प्रिय मित्रहरुको भेटघाटले मन प्रशन्न रहने छ ।
आफन्तजनहरुको साथ सहयोग द्वारा गरिएका कार्यमा सफलता मिल्ने छ । पारिबारिक झमेलाको सामना गर्नु पर्ने छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउने छ । सभा सम्मेलनमा सरिको हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । साझेदारी कार्यमा बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने समय रहेको छ ।
आँट र साहसमा बृद्दी हुनेछ । मित्रजन तथा दाजुभाईको साथ सहयोग मनग्य प्राप्त हुनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन । यात्रा फाईदामुलक साबित हुनेछ । मान्यजनको अनुसरण नगर्नाले कार्य क्षेत्रमा अपजस आईपर्ला ।
खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । बोलिको प्रभाब रहने छ । आफन्त जनको साथ सहयोग द्वारा बिग्रनलागेका कार्य सहज बन्ने छन । स्थिर सम्पत्तिमा सामान्य क्षति ब्यहोर्नु पर्ला । बिद्यार्थी वर्गकालागि समय मध्यम रहने छ ।
निर्णय गर्ने सक्ने क्षमतामा कमी आउनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । दाम्पत्य सम्बन्धमा साधारण खटपटको सामना गर्नु पर्ने छ । शारिरिक आलस्यताका कारण धनमालमा क्षति पुग्न सक्ने छ सजग रहनुहोला ।
गैर ब्याक्तिको बिश्वास गर्नाले सामान्य झन्झटको सामाना गर्नु पर्नेछ । तात्कालिन आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ । लगानिको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धमा भने सुधार आउने छ । तपाइको परिश्रमको फल अरुलाई प्राप्त हुने छ ।
नयाँ कार्यको थालनिले मन हर्शित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । भौतिक साधन स्रोतको प्रयोगमा समय ब्यतित रहने छ । ब्यापार ब्यबसायमा बिशेष लाभ रहने समय रहेको छ । नयाँ मित्र प्राप्तिको योग रहेको छ ।
पारिवारिक साथ सहयोगमा कमि आउनाले मानसिक खिन्न्ता उत्पन्न हुनेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित हुनेछ । तपाईको मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । मनोरन्जनका साधनको खरिदमा सामान्य खर्च रहन सक्ने छ ।
अरुको गलत कदमको प्रतिफल तपाईले भोग्नुपर्ला । दाजुभाईसँगको सम्बन्धमा सामान्य झन्झट देखा पर्न सक्ने छ । यात्रा झन्झन्ट पूर्ण रहन सक्ने छ । अपरिपक्व निर्णयले साधारण अपजसको सामना गर्नु पर्ला । धार्मीक कार्यमा सहभागिता मिल्ने छ ।
खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । स्वास्थ्यमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धनमालको क्षति हुन सक्नेछ । बालीका कारण आफन्तजन रुष्ट रहलान ।
साझेदारी कार्यमा अगाडी नबढेकै राम्रो हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य खटपट देखा पर्ने छ । ब्यापार ब्यबसायमा घाटोका समय रहनाले सजग रहनु होला । मान्यजनको अनुसरण फाईदाजनक रहनेछ । सामान्य खर्चको योग रहेको छ ।
प्रतिपक्षीहरु शुभचिन्तक बन्ने छन । प्रतिश्प्रधा मुलाक कार्यमा तपाई अग्रसर रहनु हुने छ । चिसो सम्बन्धी समस्याले सताउन सकने छ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । शत्रु पराजय हुनेछन ।
ताजा समाचार प्रधानमन्त्री दाहालले चिनीया राष्ट्रपति भेट्दै, यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको आजको कार्याक्रम